कांग्रेस जिल्ला अधिवेशनमा कुटा कुट, १ प्रहरी घाइते, के छ अवस्था ? — Sanchar Kendra
कांग्रेस जिल्ला अधिवेशनमा कुटा कुट, १ प्रहरी घाइते, के छ अवस्था ?
बाजुरा । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाअधिवेशनअन्तर्गत बाजुरामा भएको जिल्ला अधिवेशनमा झडप भएको छ। जिल्ला निर्वाचन समितिका प्रवक्ता प्रेम रौलेले मतदान सकिएर मत पेटिका व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराले उक्त घटनामा एक जना प्रहरी घाइते भएको बताए। घाइते प्रहरीको अवस्था समान्य छ। वीरेन्द्र गिरीसहितका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मतगणना गर्ने तयारी गरिएकोमा झडपपछि मतगणनाको काम अनिश्चित बनेको प्रवक्ता रौलेले बताए।
कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा सभापति पदका लागि कविराज पण्डित, रामसिंह रावल र चक्र शाहीबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जिल्ला अधिवेशनमा कांग्रेसका एक हजार दुई सय १२ मतदाता छन्।
१४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत कांग्रेसका १० जिल्लाले आगामी ४ वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् । तीमध्ये ६ जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ, ४ जिल्लामा चुनावी प्रतिस्पर्धा । जिल्ला सभापतिका लागि ताप्लेजुङ, संखुवासभा, रामेछाप र दोलखामा चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
दोलखामा दोस्रो चरणसम्म पनि चुनाव भयो । रामेछापमा पौडेल समूहकै समर्थनमा देउवानिकट नेता सभापति चुनिए, उता संखुवासभामा देउवा समूहसमेतको समर्थनमा पौडेल समूहका नेताले चुनाव जिते ।
मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, हुम्ला, कालिकोट र गोरखामा भने जिल्ला सभापति चुनिए । गुटगत आधारमा परिणामलाई अंक गणितमा हेर्दा यी १० मध्ये पहिले पनि पौडेल समूहका ६ र देउवानिकट ४ जिल्ला सभापति थिए, अहिले पनि दुवै पक्षका त्यति नै जिल्ला सभापति निर्वाचित छन् ।
तर, जिल्लैपिच्छे फरक समीकरण र गठजोडका कारण जिल्ला भने अदलबदल भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्रभाव भएका गोरखा र दोलखाको नेतृत्व गुमाएका छन् । पौडेल समूहले ताप्लेजुङ र रामेछापमा नेतृत्व गुमाएको छ । मनाङ र हुम्लामा देउवानिकट नेताहरु सर्वसम्मत भएका छन् भने मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, कालिकोट र गोरखामा पौडेल समूहका नेताहरु सर्वसम्मत जिल्ला सभापति बनेका छन् ।
कांग्रेसले दसैं अगावै हिमाली जिल्लामा जिल्ला तहसम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, १० जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सकिएको छ । यसबाहेक मुगु, बाजुरा र बझाङको अधिवेशन हुँदैछ । मुगुमा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ ।
मतगणना सुरू भए पनि अन्तिम परिणाम आउन केही दिन लाग्ने निर्वाचन अधिकृत नरेन्द्र सिंहले बताए । बाजुरामा सभापतिका लागि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ । मंगलबार मतदान भइरहेको छ । बझाङमा भने २१ असोज अर्थात् बिहीबारमात्रै निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।